ब्लग मंगलबार, भदौ ६, २०७४
यसरी 'पहरेदार' बनेर बसेको छ माओवादी नेतृत्व र यसले सेनाका अधिकारीलाई पनि 'राहत' मिलेको छ।
माओवादीका 'भिक्टिम' हुन् वा सुरक्षाफौजका, द्वन्द्वपीडितहरू संगठित भएका छन्। तर दलहरू पनि संगठित भएका छन्, पीडितको मागलाई नसुन्ने षडयन्त्रमा सहकार्य गर्दै।
कारण खोज्नुपर्छ, किन नन्दप्रसादकी सह–सत्याग्रही गंगामाया लगायतको न्यायको मागको सुनुवाइ हुँदैन? किन द्वन्द्वकालका बालसैन्यलाई आज विना अभिभावकत्व 'टुहुरो' बनाइएको छ?
पीडितको यस्तो अपहेलनाको अन्तर्यमा रहेको छ– माओवादी पार्टीको आन्तरिक राजनीति। खुला समाजमा अवतरण गरेर राज्यशक्ति/राज्यकोषको स्वाद चाखिसकेका माओवादी 'टप र्‍यांक' लाई एउटै द्वन्द्वकालीन ज्यादतीको खुलासा र न्यायिक निरुपण हुन दिनु नै छैन।
यो पूरै संक्रमणकालीन श्रृंखलामा 'लोकतान्त्रिक' दलहरूले आफूलाई नंग्याएका छन्; आफ्नै कार्यकर्ता, स्थानीय नेताको 'सफाया' गर्ने जमातसँग सहकार्य गरेर। जनतालाई अनर्थको 'तालमेल' स्वीकार्न बाध्य पारेका छन्।
'फेट् अकम्प्ली' राजनीतिले हामी सबैको मान्यतालाई धक्का दियो, हामी सबै जे पस्किइन्छ थालमा त्यो खान बाध्य भयौं।
त्यस दिन १९ जना माओवादी कार्यकर्तालाई दोरम्बा गाउँमाथिको डाँडाकटेरी भनिने पाखोमा 'प्वाइन्ट ब्ल्यांक रेन्ज' मा गोली चलाएर, मारेर तलतिर फालिदिएर सिपाही टुकडी मन्थली ब्यारेकतर्फ झारेको थियो।
पंक्तिकार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा गठित 'दोरम्बा छानबिन कार्यदल' को सदस्य भएर घटना भएको ११ दिनपछि डाँडाकटेरी पुगेको थियो।
दोरम्बामा हत्या गरिएका नागरिकहरूको सम्झना मेरो पुस्तक 'देखेको मुलुक' (२०६६) का हरफहरूद्वारा पेश गर्दछुः
'' .... फुली लगाएको अर्को एउटा अनुहार पनि हाम्रो सामु आयो। उनी क्रान्तिकारी महिला संघकी सचिव विष्णुमाया थापामगर थिइन्। उनको नोटप्याड, समिति बैठकका 'माइन्यूट' हरू र विभिन्न कागजातसहित टुथपेष्ट तथा काइँयो अलिपरको जलेको रासमा फेला पार्‍यौं। ती कागजातमा मैले 'क्रान्ति' मा समर्पित दिवंगत महिलाको जोश, जाँगर र कटिबद्धता उजागर भएको पाएँ। मनमनै उनलाई श्रद्धाञ्जली दिएँ र मुलुकप्रतिको विश्वास र जीवनदान खेर नजाओस् भन्ने कामना गरें, यद्यपि उनले अँगालेको दलको दर्शनसँग म सहमत हुन सक्दिनथें।
सिद्धान्ततः अव्यावहारिक र उपयोगितावादमा लागेको नेकपा (माओवादी) नेतृत्वको जति आलोचना गरे पनि गाउँगाउँमा अन्य राजनीतिक दलबाट न्यायपूर्ण सामाजिक र आर्थिक विकास नदेखेपछि चेतना र जागरण ल्याउन लागेका माओवादी युवा कार्यकर्ताको समर्पणभावको कदर गर्नै पर्दछ। लक्ष्य हासिल गर्न सिकाइएको तरिका गलत थियो होला तर विष्णुमाया जस्तै अनगिन्ती कार्यकर्ताहरूको दृढ कटिबद्धता र निष्ठामाथि मलाई कुनै शंका थिएन र छैन। उनीहरूको बलिदान जनताकै लागि थियो, मलाई लाग्छ– गैरहिंस्रक सामाजिक क्रान्तिमार्फत आउँदा दिनमा त्यो बलिदानलाई सार्थक तुल्याउनुपर्छ। र, विष्णुमाया जस्ता दिवंगत आत्माको सम्झना गर्नुपर्छ।''